AMP plug-in ine AMP-Carousel Slider - SN
AMP plugin ne AMP carousel inotsvedza
Iyo Inomhanyisa Nhare Mapeji (AMP) jenareta yekugadzira mapeji eGoogle AMP , maplugins eAMP uye AMPHTML tag jenareta zvinotsigira kugadzikwa otomatiki kweAMP carousel.
Iyo AMP carousel inotsvedza inogadzirwa otomatiki kubva pamifananidzo yese iri muchinyorwa chinyorwa nzvimbo (mune 'itemprop = chinyorwaBody' nzvimbo ).
<amp-carousel> -Slider kusangana
Iyo Inokurumidza Mapeji eMapeji jenareta inogadzira otomatiki AMP carousel ichishandisa iyo 'amp-carousel' tag kana paine inopfuura imwe chinyorwa chinyorwa munzvimbo yechinyorwa!
Iyo AMP carousel inotsiva yakajairika chinyorwa chemufananidzo pane iyo AMPHTML peji.
Panzvimbo pe AMP carousel, chete chinyorwa chinyorwa chinyorwa chinoratidzwa kana nzvimbo yacho inongoramba isina chinhu.
Mifananidzo iri muAMP carousel inopihwa nekinyorwa. Iyo <img> tag hunhu 'alt =' uye 'title =' inotorwa kubva papeji rekutanga semagwaro. Kana hunhu uhwu husina kutsanangurwa mune yekutanga peji, iyo Inokurumidza Mapeji eMapeji jenareta inoshandisa iyo <Title> tag yechinyorwa.